Isikhathi sikaNcibijane eMsunduzi – Msunduzi News
Isikhathi sikaNcibijane eMsunduzi
UMasipala wethule izinhlelo zamaholide ezibandakanya nezokuphepha
Kusuka ngoMasingana kuya kuZibandlela, uMsunduzi uyikhaya lamakhulu ngamakhulu abantu kwazise kawugcini nje ngokuba yikheli kwabayizakhamuzi kepha uyisizinda sikaHulumeni njengoba uyiNhlokodolobha. Njengoba kusondele amaholidi okuphela konyaka ingxenye ethile iyagoduka kepha iningi liyasala kanti abanye bayafika bezovakashela uMsunduzi namaphethelo. Kungalesi sizathu uMasipala minyaka yonke uhlale uqhamuka nezinhlelo zikaqedisizungu. Kulokhu ngaphansi kwesiqubulo 2018 Capital Festive Drive uMasipala wethule uhlelo oluthinta ezokuvakasha nezokuphepha. Ngokusho kweMeya lokhu kumqoka ngoba likhona iphutha lokunaka ezikaqeda isizungu bese kukhohlwa ezokuphepha nokuthi uma kunjalo kugcine kudunge injabulo esuke ikhona.
“Isikhathi sikaKhisimusi noNcibijane simqoka ngezizathu eziningi. Ngaphandle nje kokuthi kuba nemicimbi kepha kuba nayisikhathi sokuhlangana kwemindeni. Kuba muncu uma kuthi kuyileso simo bese kuba khona abadlula emhlabeni ngenxa yezingozi noma abaphuthunyiswa ezibhedlela ngenxa yokulimala. Yikho nje sithi akuthi lapho siqhakambisa injabulo bese khona lapho sikhumbuze abantu ukuthi uma sibudedengu kungenzeka into engadunga injabulo”, kusho uNjilo. Ephawula ngekhalenda lamaholidi ebelethulwa uthe phakathi kokunye leli khalenda liqukethe izinhlobonhlobo zezokuvakasha, ngoba njengoMkhandliu bayazi ukuthi abantu abathandi izinto ezifanayo.
Omunye obekhona kulo mcimbi wokwethulwa kwekhalenda bekunguMnu uMthuthu Sikhakhane obemele amaphoyisa omgwaqo aseMsunduzi. Lapha uMboma wethule izinhlelo zokuqinisekisa ezokuphepha emizileni ethile kanye nalezo zokuthiba ongom’uyayona, izindlamanzi eziyendela emigwaqweni. “Kuyisifiso sethu ukuthi uma sekukhishwa inani labantu abalahlekelwe imiphefumulo yabo emgwaqweni kungabalwa noyedwa waseMsunduzi. Kuko konke okuzobe kwenzeka amalambu aluhlaza azobe ekhona,” kusho uSikhakhane.
Isikhulu esiphethe ezokungcebeleka eMsunduzi, uNks uGugu Mvelase uthe: “Inhloso ye-2018 Capital Festive Drive ukuthi abantu baseMsunduzi bazi ukuthi kwenzakalani endaweni abahlala kuyo, bangaze baye ezindaweni ezingomakhelwane ngoba bengazi okwenzaka endaweni yangakubo.”
UNks uMvelase unabe ngokuthi akungoba bekhombisa ukuthi idolobha liphetheni kodwa banesifiso sokukhulisa amabhizinisi endawo, waveza nokuthi kungumsebenzi wabo njengophiko lezokuvakasha ukuba baqinisekise ezokuphepha kubavakashi abazobe behambele indawo yaseMsunduzi. “Asiphumeni ngobuningi bethu siyoxhasa amabhizinisi endawo, ngoba nawo anako lokho okusuke kuhanjelwe ngabavakashi,” kusho yena.
UMnu uDumisani Mhlongo oyisikhulu kuMsunduzi Pietermaritzburg Tourism Association (MPTA) enkulumweni yakhe uveze ukuthi idolobha uMgungundlovu liyakhula kwezokungcebeleka ngenxa yemicimbi esingathwa ileli dolobha. “Siyazi uma kunemicimbi kuba nesiminyaminya emigwaqweni, kodwa lokho sesikulungiselele,” kusho uNjomane.
Emva komcimbi wokwethulwa kwekhalenda iMeya kanye nabasebenzi baseMsunduzi baphikelele emarenki kanye nase-Edendale Mall beyonikezela abantu ngekhalenda.
Previous post: Idolobha ligqugquzela amaqhinga akha ubuhlobo ngemidlalo
Next post: UMasipala yikhaya labo bonke abantu